Chitendero cheAustralia, une mangani? | Absolut Kufamba
Susana Maria Urbano Mateos | | Ositireriya
Pane zvinhu zvinoverengeka zvinoita tsika yenyika, senge mari, gastronomy, tsika, zvematongerwo enyika, uye chitendero. Chitendero cheAustralia Iyo yakasimba uye yakakosha dingindira, iyo, senge zvese zvimwe zvinhu, yakarongedzwa nekufamba kwenguva, kuti isvike pane izvozvi, ichiva yayo yega munzvimbo iyo inogamuchirwa.
Australia inowanikwa kunyanya kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweAsia, yakakomberedzwa neIndia nePacific Oceans, inzvimbo izere netsika uye pamusoro pezvose nhoroondo, parizvino sezvazvakajairwa nemafungiro matsva akabuda nekufamba kwenguva anga achichinja. pfungwa yechitendero, mune dzimwe nguva zvichikonzera kuti vanhu varambe dzidziso dzakadai uye Australia chimwe chazvo.
Parizvino, mazhinji e Vagari veAustralia Inowanikwa mu60% iyo inoita iyo Chitendero chechiKristu kana Katurike, imwe muzana inochengetedza seinozivikanwa sechitendero asi isiri yechiKristu, uye huwandu hwehuwandu hwevanhu hunofungidzirwa sehusatendi zvachose.
Panyaya iyi, kana uchitaura nezve iyo Chitendero chechiKristu Inofanira kutakurwa mupfungwa kuti ndeimwe yeiyo akakurisa pasirese, sezvo ichichengeta nzvimbo yekutanga nevateveri vakuru uye vatendi, asi sezviri pachena munguva dzese dzechiKristu, zvitendero zvidiki zvakatorwa, izvo zvakadaro zvinekutenda kwamwari mumwe chete, havana nzira imwechete yekumunamata. . Tevere isu tichagadzirisa kusahadzika nezve chii chinamato cheAustralia kana, asi, zvitendero.
1 Zvitendero zveAustralia zvakabva muchiKristu
2 Zvimwe zvitendero zveAustralia
Zvitendero zveAustralia zvakabva muchiKristu
Chitendero chakagadzirwa muEngland mushure mekurambana pakati paHenry VIII naCatherine, izvo zvakakonzera hukama hwechitendero kuputsa chibvumirano neRoma. Saka chitendero chake chitsva che cato-Protestant hunhu.
Iko kufamba kwe hunhu hweevhangeri Machechi echiKristu kuburikidza nekutenda kwakajairika kudenga. Ivo vanonyanya kutenda kuti kuwanikwa kweruponeso kunouya kuburikidza nekutenda mavari uye muna Jesu Kristu, pamusoro pekupindira kwaMwari.
Lutheranism inouya mushure Martin Luther anovandudza, akashora simba repapa, nekudaro akadzingwa. Mushure mechinguva kutenda kutsva uku kwakamuka ... uko kunoponeswa kwakazara kuburikidza nekutenda kwedu.
Ndicho kufamba kweevangelical Kubudikidza nemachechi, pane zvisikwa zveizvi uye imwe neimwe yadzo ichatora mhemberero kana mhemberero zvichienderana nezvazviri zvinozivisa.
Zvimwe zvitendero zveAustralia
Sezvambotaurwa pamusoro, kwete chete chitendero cheKaturike chinozivikanwa muAustralia, asi mamwe marudzi ezvitendero aripo, akadai se:
Achiuya kubva kuIndia, anoremekedza tsika dzakasiyana siyana uye zvitendero uko kunonyanya kuve mwari Guatama Buddha iyo inokudzwa nekushinga kukuru. Kunze kwekutorwa sechitendero chechina chakakosha pasi rose.
Icho chinamato cheAustralia cheAbrahama monotheistic hunhu, uko kutenda kwaro kuchatungamirwa ne bhuku ra Korani, izvo zvinoraira kuti hakuna mumwe mwari asi Ala. Parizvino ndicho chechipiri chitendero chakakosha pasi rose, sezvo chiine nhamba inoshamisa yevateveri vakavimbika.
Icho chinamato cheAustralia icho chine yakawandisa kwazvo yekare, inofungidzirwa seiyo chitendero chechitatu chakakosha pasi rose, nekuda kwenhamba huru yevakatendeka vanoishandisa. Polytheistic, zvinoreva kuti vane huwandu hukuru hwevamwari vekunamata.
Pasina kupokana iyi ndiyo chitendero chekaresa pane izvo zvinyorwa, sezvo chiKristu chakatanga kubva pane izvi, chinozivikanwa nekuteerera kuda kwaMwari zvizere, pamusoro pekuve nekutenda kwakadzika midzi.
"Chitendero imba ine magonhi mazhinji ..." pasina kupokana Australia ine huwandu hwakakura kwazvo kana zvasvika pakunamata, kunyangwe saka iri nzvimbo yausingafanire kupotsa kuziva uye kunyudza nhoroondo uye nei? ye zvitendero zvakasiyana, iyo seyese yakaita shanduko nekufamba kwenguva, asi zvakadaro; hazvireve kuti varasikirwa nehunhu hwavo. Iwe unogara uchifanira kuve neakavhurika pfungwa yeruzivo rutsva uye zviitiko, pamwe nekugona kunzwisisa nyika.
Iwe unotoziva here izvo Chitendero cheAustralia?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Chitendero cheAustralia
Guta rakagadzirwa neCuenca